Nagu Saabsan - Huangshan Pantex Industrial Co., Ltd.
Maskaxda Wejiga Ka ilaaliya Maska
Maskaxda Wejiga Caafimaadka Maskaxda ah
Maska ilaaliyaha ee Kn95
Difaaca Badbaadinta Guud
Faa'iidada Go'aanka ah ee la tuuray
Difaaca guud ee tuuri kara (Qaaf)
Difaaca guud ee Bakhtiinta (Bakhti)
Tuur qalliinka la tuurayo
Tuur go'doon ah oo la tuuray
Daboolida Kabaha Tuur
Galoofyada Tijaabada Caafimaadka
Galoofiska Tijaabooyinka Caafimaadka Nutrile (Non-Sterile)
Galoofyada Tijaabinta Caafimaadka Vinyl
Gacmo gashiga qalliinka dambe (Sterile)
Xafiisku wuxuu ku yaal magaalada dalxiiska ee caanka ah-Hangzhou, Pantex waa shirkad xirfad-yaqaan ah oo ku hawlan soo-saarka iyo iibinta ilaalinta alaabada iyo dharka diyaarka ah iyo badeecooyinka la xiriira. Shirkadda waxay leedahay qol-show iyo R&D xarunti Hangzhou iyo hal100%warshad iska leh magaalada huang shan, oo ah buurta ugu quruxda badan Shiinaha oo ay ku taal, oo kaliya 2 saacadood baabuur, 1.5 saac tareen xawaare sare leh oo ka socda Hangzhou. Wershadda waxaa la aasaasay 2007. Baaxadda guud ee warshadeena waa 30,000 mitir oo laba jibbaaran, oo ay ku jiraan in kabadan 400 shaqaale xirfad sare leh, oo ka gudbay ISO9001, ISO14001 caddeyn iwm.
Alaabooyinkayada ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa daryeelka caafimaadka, deegaanka caafimaadka. Waxaan haynaa alaabooyin badan oo la tuuri karo oo ay ku jiraan maaskaro wajiga, ilaalinta guud ahaan, goonni go'doomin, goonno qalliin, dabool kabaha, galoofiska baarista, iwm.
Pantex waxay ku ridi doontaa hal-abuurka shirkadeed ee “Noqo mid lagu kalsoonaan karo, Inaad noqoto mid wax qabad leh oo dadka kaamil u noqota ficil si aad u xaqiijiso “Dhamaan GuulMacaamiishayada iyo macaamiisheena.
Su'aalaha ku saabsan badeecadaheena ama qiimeyahankeena, fadlan noogu soo dir emaylkaaga waxaanan la xiriiri doonnaa 24 saacadood gudahood. Weydiimaha Qiimeynta
Xirfadda Doorashada iyo Soo iibsashada Maaskarada ...
1. Kartida wasakhda boodhka Maaraynta boodhka maaskarada waxay kuxirantahay kartidooda xanibaada ee boodhka, gaar ahaan boodhka la jecelyahay ee ka hooseeya 2.5 microns. Sababtoo ah xajmiga qashinkan ee boodhku wuxuu noqon karaa si toos ah…
Waxa Faa'iidooyinku Ay Leeyihiin Maskaarta La Iibiyo ...
Hada wasakhowga hawada ayaa ah mid aad iyo aad u xun, isticmaaleyaal badan ayaa xirto maaskaro, maaskaro la isticmaali karo waa kuwa ugu badan ee ay adeegsadaan dadka isticmaala suuqa. 1. Maqaar jilicsan oo la adeegsan karo maaddooyinka la tuuray ayaa sidoo kale xoogaa wanaagsan, ...
1. Xiro maaskaro inta lagu guda jiro xilliga hargabka sare, maalmaha qiiqa iyo boodhka, marka aad xannuunsato ama aad aadid isbitaalka si aad u hesho daweyn caafimaad. Xilliga jiilaalka, dadka da'da ah ee difaaca liito, kuwa jiran ...
Tabarucaad lagula dagaallamayo caleenta cusub ee faafa
Maal-galinta Tartanka Qaranka ee Wadada Wadnaha 2019…